Mmapụta Ugbu Circuit emebi na overcurrent Protection (RCBO) Manufacturers & Suppliers - China Mmapụta Ugbu Circuit emebi na overcurrent Protection (RCBO) Factory
DABL-63 RCBO 6KA Residual Ugbu A Na-arụ Ọrụ Circuit Mgbawa
Ihe nchekwa ihe eji arụ ọrụ ugbu a na-ebugharịDABL-40are maka nchekwa ihe egwu eletrik ma ọ bụrụ na nrụnye mkpuchi eletriki, maka igbochi ọkụ kpatara site na mmiri mmiri ugbu a, ibufe na nchedo sekit.
A na-atụ aro ha maka ichedo ahịrị otu na-ebute ihe ndozi n'èzí, akụrụngwa na ụgbọala na ọkụ ala.
DABL-63 Nova Series Residual Ugbu A Na-arụ Ọrụ Circuit Oké Mgbapu na Nchedo karịrị
DAB7LN-40 usoro DPN Residual Ugbu A Ọrụ Circuit emebi (RCBO)
DAB7LN -40 ihe nkuku sekit dị ugbu a bụ obere ngwaọrụ ndị ejiri ikike dị elu (6kA) rụọ ọrụ ma ha adabara maka nkwụsị nke akara ndị na-anọghị iche. nke ugbu a abụghị karịa 40A. Nke a na-echebe ndị mmadụ nke ọma site na ọkụ eletrik na akụrụngwa akụrụngwa na-eme ka ihe dị egwu ma ọ bụ dị mkpirikpi.
RCBO 4.5KA Residual Ugbu A Circuit emebi na overcurrent Nchedo
Okwu Mmalite Ihe eji emeghari ihe eji arụ ọrụ ugbu a na ihe nchebe ABDT-63 ezubere maka nchedo ihe egwu nke ọkụ eletrik ma ọ bụrụ na nrụnye nrụnye eletriki, maka igbochi ọkụ nke mmiri dị ugbu a, ibufe na nchedo sekit. A na-atụ aro ha maka ichedo ahịrị otu na-ebute ihe ndozi n'èzí, akụrụngwa na ụgbọala na ọkụ ala.